Chọrọ kwụsịrị gị Samsung Galaxy S4? Ị na-na na-nri ebe. Nke a ndu ga-eje ije gị site zuru dịrị usoro iji Odin na CWM.
Tupu ị kwụsịrị gị Samsung Galaxy S4, mkpa ka ị mara ihe n'okpuru:
1) Nke a ndu bụ nanị n'ihi na Galaxy S 4 (gt-i9500). Ọ bụrụ na ị chọrọ kwụsịrị ọzọ Android ngwaọrụ, ị na-na na na-ezighị ezi na peeji nke. Biko obiọma chọọ ngwaọrụ gị nlereanya na anyị website.
2) dịrị ngwaọrụ gị voids ekwentị gị akwụkwọ ikike.
3) Back niile data na ngwaọrụ gị dị ka a precause, iji gbochie data si adịkwa.
4) Ị na-eme ya na gị onwe gị n'ihe ize ndụ.
Ọzọ, ka ego Olee otú Iji mgbọrọgwụ gị Samsung Galaxy S4 (gt-i9500) nzọụkwụ-na-nzọụkwụ.
Mfe nzọụkwụ nke dịrị gị Samsung Galaxy S4 i9500
Nzọụkwụ 1. gbanyụọ ekwentị gị, na pịa ala Mpịakọta Down + Center Home + Ike buttons n'out oge maka banyere 5 sekọnd.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ịdọ aka ná ntị ihuenyo egosi, hapụ niile buttons, na mgbe ahụ enweta olu elu button ịbanye Odin Download mode.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a ga-esi gị Galaxy S4 jikọọ kọmputa na a Micro-eriri USB.
Nzọụkwụ 4. Ọzọ, download cofface_I9500_cwm_recovery_en_new. ClockworkMod bụ ugbu a maka gt-i9500, Sprint SPH-L720, na T-Mobile SGH-M919 ụdị (Anyị ga na-emelite a peeji bụrụ na e nwere ndị anụ ndị ọzọ na ụdị).
Ọzọkwa download Odin3, SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones, na CWM-SuperSU-v0.99.
Nzọụkwụ 5. unzip faịlụ nke Odin3v185 mgbe ị download ya na kọmputa gị, na-agba ọsọ ahụ odin3 v1.85.exe faịlụ site na abụọ-ịpị na ya.
Mbụ, ego odo pụta ìhè igbe. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ ya, i kwesịrị iji wụnye Samsung USB mbanye na ị na ebudatara na mbụ, site abụọ na ịpị na Samsung USB ọkwọ ụgbọala exe faịlụ. Mgbe ahụ Kwụpụ ma jikọgharịa ekwentị gị na kọmputa. Ugbu a ị ga-ahụ na-acha odo odo pụta ìhè igbe.
Ugbu a nne Mmetụta kwụsịrị PDA na-agagharị na CWM mgbake gị ebudatara mbụ (cofface_I9500_cwm_recovery_en_new.tar), wee pịa Malite bọtịnụ na-amalite flash CWM mgbake ekwentị gị. Nke a ga-Flash a omenala CWM mgbake gị Galaxy S4 na ekwentị gị ga-reboot.
Mgbe ị na-ahụ-agafe! (nke e gosiri na nzọụkwụ 4), ọ pụtara na ihe niile wee ọma.
Nzọụkwụ 6. Mgbe ị ekwentị kwusịrị ịgbanyụ, ị pụrụ iṅomi ndị SuperSU zip faịlụ (CWM-SuperSU-v0.99.zip) ị ebudatara tupu ekwentị gị. Ọ nwere ike na-pasted n'ebe ọ bụla na gị Galaxy S4. Kara gị mma ike ọhụrụ nchekwa maka ya na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 7. Gbanyụọ ekwentị gị, na mgbe ahụ jide Mpịakọta Up + Center Home + Ike buttons ọnụ.
Nzọụkwụ 8. Mgbe Samsung logo na-egosi na gị na ekwentị n'ụlọ ihuenyo, ị nwere ike hapụ Ike button, ma ịnọgide na-ejide ala Mpịakọta Up + Center Home buttons.
Nzọụkwụ 9. Ozugbo ekwentị gị bụ na CWM Iweghachite, họrọ "wụnye zip si sdcard" na enweta na Ike bọtịnụ.
Nzọụkwụ 10. Next, họrọ "họrọ zip si sdcard" na enweta na Ike button ọzọ.
Nzọụkwụ 11. Iji nọgide na, họrọ "0 /" ndekọ na see Ike bọtịnụ.
Nzọụkwụ 12. Mgbe ahụ ahụ SuperSU zip faịlụ na ị depụtaghachiri n'elu ekwentị gị na mbụ na see Ike bọtịnụ.
Nzọụkwụ 13. Họrọ "Ee" na see Ike bọtịnụ.
Nzọụkwụ 14. Nke a ga-wụnye su Binaries na SuperSU superuser ngwa na ekwentị gị. Nke a nnoo na "mgbọrọgwụ" gị Galaxy S4.
Nzọụkwụ 15. Mgbe "mgbọrọgwụ" bụ ihe karịrị, ị pụrụ ịhụ "Emela!". Mgbe ahụ laghachi isi menu na-ahọrọ "reboot usoro ugbu a", na iti Ike bọtịnụ. Gị Galaxy S4 ga-reboot.
Nzọụkwụ 16. Ozugbo gị Galaxy S4 na-rebooted, ị kwesịrị ị chọta SuperSU ngwa na ngwa gị drawer.
Nzọụkwụ 17. Pịa-agba ọsọ ahụ SuperSU ngwa ozugbo na imelite Binaries.
Nzọụkwụ 18. I nwere ike ịchọpụta na ị nwere zuru mgbọrọgwụ Site na nbudata na oghere gbanyere mkpọrọgwụ ngwa dị ka Titanium ndabere ngwa (nke m ukwuu nwere ike ikwu maka akwado / kefriza / un-wụnye gị ngwa ọdịnala).
Ị ga-ahụ a Superuser arịrịọ window mmapụta! Ekele, i n'ụzọ zuru ezu gbanyere mkpọrọgwụ gị Galaxy S4!
Naghachi Ndi ana-akpo si Galaxy S4: Isiokwu a na-agwa gị banyere otú naghachi ehichapụ kọntaktị site na Samsung Galaxy S4 na 3 nzọụkwụ. Naghachi SMS si Galaxy S4: Nke a ndu ọnọde ị ụzọ dị mfe iji naghachi ozi site na Samsung Galaxy S4 ole na ole nzọụkwụ. naghachi Videos si Galaxy S3 Obere: Ị nwere ike naghachi ehichapụ videos si gị Samsung Galaxy S III Obere na ole na ole nzọụkwụ ala. Samsung Galaxy S Photo Recovery: Nke a ndu-akụzi gị otú weghachite foto ndị si Samsung Galaxy S ngwaọrụ ke 3 nzọụkwụ.
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Google Nexus 5 agba ọsọ Android 5.0 / 4.4.4
> Resource> Nkpọrọgwụ Atụmatụ> Olee otú Iji mgbọrọgwụ Your Samsung Galaxy S4 (Iji Odin na CWM)